मिहिनेत र परिश्रम गरे स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ । सानो लगानीवाटै मनग्ये आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ । यसको ज्वालन्त उदाहारण बनेकी छिन् पुर्वी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाकी राजकुमारी राई । हिजो अर्काकोमा गएर श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको दैनिकी अहिले फेरिएको मात्र छैन लोभलाग्दो समेत बनेको छ । उनले शुरु गरेको नर्सरी खेती उनको प्रगतिको कारण बनेको हो । यो क्षितिज नर्सरी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडानं. १ मा रहेको छ । यो नर्सरीमा दैनिक तीनजनाले रोजगारी गर्ने गर्दछन् । यही नर्सरीमा दैनिक विरुवा रेखदेख गर्दै ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको बिकास गरेर पलायन भएका युवाहरुलाइ रोजगारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।उनले नेपालमा वार्षिक २० लाख पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन सके २० देखि २५ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।रुपन्देही व्यापार संघको मुख्य आयोजनामा बुटवलमा सञ्चालित लुम्बिनी एक्स्पो–२०७२, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको मंगलबार आयोजित समापन समारोहलाई संबोधन गर्दै उपाध्यक्ष खतिवडाले हाल ४० लाख नेपाली कामका शिलशिलामा विदेशमा रहेकाले त्यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन पर्यटकीय क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । यसका लागि ...
बिदेशी पर्यटकलाई अश्लिल शब्द प्रयोग गरेर अंग्रेजीमै गाली गरेको भिडियो बन्यो भाईरल
बिदेशी पर्यटक नेपालको लागी पाहुना हुन् । उनीहरु नेपालमा बसिन्जेल हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । पछि उनीहरु आफ्नो देश गएपछि नेपालको प्रशंसा गर्न सकुन । तर कोही कोही यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् जसले देशको इज्जतसंग कुनै सरोकार नै राख्दैनन् । अन्नपूर्ण क्षेत्रका पर्यटकलाई डिस्काउण्टको निहुमा एक महिलाले अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै गरेको गाली भाईरल बनेको छ । नजानिदो अंग्रेजी भाषामै उनले गाली गरेकी छन् । बिदेशी पर्यटक नेपालको लागी पाहुना हुन् । उनीहरु नेपालमा बसिन्जेल हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । पछि उनीहरु आफ्नो देश गएपछि ...